Wararka - Foton wuxuu Beijing geeyey 2,790 unug oo ah basas cusub oo tamarta laga helo
Foton waxay Beijing gaysay 2,790 unug oo ah Basas cusub oo tamarta ah
25-kii Maarso, xaflad ballaaran ayaa lagu qabtay xarunta dhexe ee Foton ee magaalada Beijing si loogu calaamadeeyo gaarsiinta 2,790 unug oo basaska tamarta ah macaamiishooda, Kooxda Gaadiidka Dadweynaha ee Beijing. Marka lagu daro tirada intaa le'eg ee basaska cusub ee Foton, wadarta guud ee basaska tamarta cusub ee Foton ee ka howlgalaya magaalada Beijing waxay ku sii dhowaanayaan 10,000 oo unug.
Munaasabadda bixinta, Kong Lei, Ku-xigeenka Agaasimaha Warfaafinta iyo Xafiiska Dhaqaalaha ee Beijing, wuxuu tilmaamay in tiro aad u badan oo ah basaska tamarta cusub ee Foton ay ku duri doonaan firfircooni cusub casriyeynta iyo isbeddelka nidaamka gaadiidka dadweynaha ee Beijing.
Zhu Kai, Maareeyaha Guud ee Shirkadda Gaadiidka Dadweynaha ee Beijing, wuxuu si aad ah uga hadlayaa iskaashiga ay shirkaddiisu la leedahay Foton, isagoo sheegay in labada dhinac ay sii wadi doonaan sii xoojinta iskaashigooda si loo yareeyo qiiqa kaarboonka ee aagga caasimadda. Sida laga soo xigtay Zhu, Kooxda Gaadiidka Dadweynaha ee Beijing waxay iibsadeen wadarta tirada 6,466 unug Foton AUV basaska laga bilaabo 2016 ilaa 2018 iyadoo wadarta qiimaha 10.1 bilyan RMB.
Maaddaama uu yahay mid ka mid ah ciyaartoygii hormuudka ka ahaa warshadaha cusub ee baska tamarta ee Shiinaha, Foton wuxuu sameeyay guulo la yaab leh marka la eego hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda iyo ganacsiga gawaarida tamarta cusub tobankii sano ee la soo dhaafay.
Shaqadeeda adag awgeed, Foton wuxuu iibiyey 83,177 cutub oo gawaari ah wuxuuna iibiyay 67,172 unug oo gawaari ah labadii bilood ee ugu horeysay sanadkan, taasoo u dhiganta 17.02% iyo 17.5% siday u kala horreeyaan.